နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘားအံ. နည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊
ⓘ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘားအံ. နည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင ..
ည ၁၀နာရီခွဲ ကျော်နေပေပြီ။ ဖိလစ်ပိုင် မနီလာမြို့တော် ကစားကွင်းရှိ ပရိသတ်ထု အော်ဟစ် အားပေးသံများ၊ လက်ခုပ်ဩဘာသံများ ညံနေသည်။ မိနစ် ၁၁၀လုံးလုံး ခြေကုန်အစွမ်းကုန် ကစားခဲ့ပြီး ရှုံးနေရာမှ သရေကျအောင် ကစားနိုင် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြသည်။ ထိုထက်ပို၍ ဝမ်းသာကြရသည့် အကြောင်းမှာ ချန်ပီယန်ရွှေဖလားကို ပူးတွဲရနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ကစားကွင်းထဲမှ မီးမောင်းကြီးများသည် ထိန်လင်းစွာဖြင့် အလင်းရောင်ထိုးပေးထားသည်။ ကစားကွင်းထဲဝယ် အလံနှစ်ခုကို ဖြန့်ယူ သယ်ဆောင်ပြီး ပရိသတ်များကို လိုက်လံနှုတ်ဆက်နေသော ဘောလုံးသင်း တသင်းမှ ဘောလုံးသမားများနှင့် ပရိသတ်၏ ပြန်လည်နှုတ်ဆက် အားပေးမှုများသည် ရုပ်ရှင ...